yokudweba | Umculi u-Oleg Soloviev
yokudweba, imizobo eyenziwe ngepeyinti yeoli, gouache kunye acrylic
Painting - le yenye ubugcisa ezindala elizweni. Kuba eminyaka amagcisa abaye baphucula ubuchule babo, Thina usebenzisa izinto ezintsha kunye ezintsha, udale iindlela ezintsha, ingakumbi smear sommandla ... Kwaye namhlanje, yokudweba, imizobo eyenziwe ngepeyinti yeoli, gouache, acrylic Ndandingakwazi kuchithwe ushicilela kwi ngelaphu okanye iphepha, evumela ukuba ufumane umfanekiso ngokukhawuleza yaye kubize. Ngoko ke, abantu abaninzi bafuna incwadi art, imifanekiso lomculi onamava, leyo iza kudala isisombululo kuphela zangaphakathi, original lokujikeleza isipho kugxa, iqabane lakhe eshishinini esimthandayo. Painting nayo kuba ishishini original intshukumo - umzekelo,, imifanekiso bayihombise T-shirt, zinophawu neesouvenirs, leyo eya kuba sisixhobo inzuzo.
Ukuba ufuna izisombululo esinomfaneleko ezintsha ishishini, okanye khetha isipho kumntu, kwaye ukuba awukwazi ukufumana ipateni ekunene phakathi umsebenzi ogqityiweyo, contact! ngokucophelela, ngokukhawuleza zingambi ngexabiso ukuba enze umsebenzi nawuphi xaka. Development of mzobo ngokuqhelekileyo kuthatha iiyure ezimbalwa, ngelo xesha ndiya kuqwalasela yonke iminqweno yakho kunye neemfuno. Ngoko ke, lo umphumo, I anikele, njalo original. Uya kufumana i umfanekiso kuphela, ezinokuthi zisetyenziswe, njengokuba ufuna! Esemqoka izigaba:
1. izinto Konyulwa lulungele, omile kakuhle (umzekelo, ngelaphu lulungele okanye ikhadibhodi).
2. I zikhangela iimpawu zobuso kunye nomfuziselo loo mqeshwa okanye umfanekiso, apho web abaza kudalwa.
3. Coal aid ndincokola isifundo elizayo womfanekiso, yaye emva koko - underpainting, oko kukuthi, iindawo ezinkulu picture.
4. Emva koko, usebenzisa izinto ezikhethiweyo nezixhobo (umzekelo, oyile kunye ibrashi okanye palette imela) I ukudala umfanekiso, I khetha imibala kwaye amisele iinkcukacha lwemizobo.
Ndiyavuya ukuba enze umsebenzi ukusetyenziswa yorhwebo, ingaphakathi imihombiso, Presenta, kwakunye ne umsebenzi umfundi. Ukuba oyifunayo, abanxiba okanye uzobe umfanekiso kulo isakhelo Baguette.
Yini na ukuba uthanda iziphumo
order sinikeza - oko kusoloko ukhetho olukhulu! Mna artist lobungcali a lot of amava, kutheni intsebenziswano ineendlela ezininzi:
• kwizinga eliphezulu umsebenzi;
• ngokwentando yakho (indlela yomsebenzi, sisondele izinga, format oyifunayo, features background, izinto umsebenzi (acrylic, namafutha, gouache, njl);
• speed abulawe (avareji 2-3 ngosuku);
• ithuba ubhaliso mizobo kwi Baguette;
• picture kungenziwa odolwa kude;
• Ukuba uceba ukuhombisa umfanekiso zezikhumbozo, umzekelo, T-shirt, I ukuphuhlisa iprojekthi okanye uguqulele umfanekiso ifomu electronic.
Iinkcukacha - ndisoloko ukuphulaphula ngenyameko iimfuno zabathengi, ukuya nezo ezincane ukuphumeza iingcamango!